Saharawi Voice: Tantara Avy Amin’ny Zanatany Farany Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2014 17:12 GMT
Nanangona “tantara avy amin'ireo olona nohadinoina tao Afrika zanatany farany i Saharawi Voice, mba hitondra ireo fihetseham-po mikasika ny fiainana andavanandro ao Sahara Andrefana sy ny fahasarotam-piainana ao amin'ny sisintany bodoina.
Sahara Adrefana dia sisintany niadiana tao amin'ny faritr'i Maghreb ao Afrika Avaratra, ary iray amin'ireo toerana vitsy mponina indrindra manerantany, bahanan'ny tany lemaka be karankaina indrindra. Eo amin'ny 40% n'ny mponina dia monina ao El Aaiún, tanàna lehibe indrindra ao Sahara Andrefana.
Zazalahy avy ao Sahara Andrefana. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr Alvaro León Rodríguez (CC BY-NC-ND 2.0).
Nobodoin'i Espaina nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-19 i Sahara, ary tamin'ny 1975, navelany ny fitantanana ny sisintany ary natolony hotantanin'i Maraoka sy Maoritania. Nipoaka ny ady teo amn'ireo firenena roa tonta ireo ary nanambara ny fijoroan'ny Repoblika Arabo Sahrawi Demaokratika (SADR) miaraka amin'ny governemanta an-tsesintany any Tindouf, Alzeria ny hetsi-pahafaham-pirenena Sahrawi, Antoko Polisario. Niala i Maoritania tamin'ny 1979, ka i Maraoka sisa no nifehy tanteraka ny ankamaroan'ny sisintany.
Amin'ny voambolan'i Saharawi Voice, manantena izy ireo mba:
Ny tranonkala dia mitantara indray ireo fijoroana vavolombelona mivantana (tsy misy mpanelanelana) mikasika ireo zava-niainana manokana, tahaka ny valinteny nomen'ilay atleta Saharawi, Salah Amidan raha nanontaniana ny antony nihazakazahany hisolo-tena an'i Frantsa fa tsy ny fireneny manokana:
Olana hafa noresahana tao amin'ny bilaogy ihany koa ny fampianarana. Teratany Saharawi Agaila Abba Hemieda nizara momba ny fanapaha-kevitra sarotra noraisiny tamin'ny fahazazany:
Mpandray anjara Aseria Mohamed Taleb nizara ny heviny mikasika ny dikan'ny fanontaniana hoe “Inona no atao hoe trano aminao” amin'ny olona izay “ireo tobim-pialokalofana fotsiny no mba fahitany”. Nilaza izy fa tsy maintsy mamaly ity fanontanina ity isan'andro.